Abetoho bakhala ‘ngokweqiwa’ | Isolezwe
Abetoho bakhala ‘ngokweqiwa’
Isolezwe / 5 March 2013, 10:47am / NONHLANHLA MKHABELA
BEBEFUNA izimpendulo ngokuqashwa kwabantu bebe bekhona bengamatoho abasebenzi bakaMasipala abaqashwe ngaphansi kohlelo lwe-EPWP izolo e-City Hall eThekwini. Isithombe: SANDILE MAKHOBA
ABASEBENZI abaqashwe wuMasipala weTheku njengamatoho ngohlelo lwe-Expanded Public Works Program (EPWP) bavuke umbhejazana izolo batoyiza ngaphandle kweCity Hall bekhala ngokungaholi nokuqedwa kwezinkontileka zabo.
Abasebenzi bakhala ngokuthi umasipala uqasha abantu abasha njalo ukuzokwenza umsebenzi owenziwa yibona kodwa bekhona bona abafika phakathi kuka-2010 no-2011 bengamatoho nokuyimanje izinkontileka zabo zivaliwe.
Omunye wabasebenzi ongathandanga ukuzidalula ngoba esabela umsebenzi uthe kwazinkontileka lezi ezilokhu zivalwa ziphinde zivuselelwe ziyabadida ngoba babesayinde isivumelwano esithi inkontileka yabo izophela ngo-2016.
“Sebelokhu bezinqamula manje basisayinise unyaka noma izinyanga belokhu bezivuselela ekubeni kwakuthiwe inkontileka iphela ngo-2016,” kuchaza umsebenzi.
Uthe bafuna ukuyeka ukuba ngamatoho, baqashwe ngokugcwele, kuyekwe ukuthi basalele ngaphandle njalo uma kukhona izikhala zemisebenzi.
Omunye ukhale ngokuthi imali abayithola ngenyanga incane kakhulu akuphileki ngayo futhi kukhona abathola imali ethe xaxa kunabanye ekubeni benza umsebenzi ofanayo.
“U-R2 300 esiwutholayo mncane kakhulu. Enye into sithola imali engalingani kodwa sibe sonke senza umsebenzi ofanayo futhi olinganayo,” kusho umsebenzi.
Abasebenzi bebewotha ubomvu emuva kokuzama ukuxhumana nezikhulu zikaMasipala weTheku kodwa kwangatholakala ngisho noyedwa ukuzolalela izikhalo zabo.
UNobhala wenyunyana, i-South African Municipal Worker’s Union waseThekwini, uMnuz Nhlanhla Nyandeni, akatholakalanga ukuthi aphawule njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa nomlayezo awuthunyeliwe akazange awuphendule.